I-studio egqwesileyo, yangoku kunye neTofotofo eWest End - I-Airbnb
I-studio egqwesileyo, yangoku kunye neTofotofo eWest End
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguYemi
Imizuzu emi-5 ukusuka kumbindi wePalmerston North. Ivulekile kwindawo efanelekileyo. Ine-ensuite eneshawa, amampunge, indlu yangasese kodwa ayinakhitshi ligcweleyo. Indawo inewodrophu, i-microwave, isomisi seenwele, iTV, itoaster, iipleyiti, i-cutlery, ibhodi yokunqunqa, i-oveni encinci, iketile yombane, ifriji encinci, impompo yobushushu, iti, ikofu kunye nobisi. QAPHELA; Isidlo sakusasa asifakwanga. Indawo yokupaka yasimahla kwizakhiwo/esitratweni. Indawo yokuhlamba impahla kunye nobisi/ivenkile eluncedo zikufuphi. Iindawo zokutyela ezininzi / iivenkile ezinkulu kunye nokuhamba koMlambo ngaphakathi kwe-15-20 imizuzu yokuhamba.
Istudiyo sisandul 'ukulungiswa, sitofotofo, sicocekile, siqoqoshiwe, singasese ibe sitofotofo.
Istudiyo sibekwe ngasese kwinqanaba elinye (kwinqanaba lokuqala) ngaphezu kwegaraji yethu. Kufuneka inyuke izitepsi ezilishumi elinesibini kwityala lezitepsi.
Istudiyo siseduze nendlu yethu, kwicandelo elicocekileyo nelinokuthi cwaka.
Esi situdiyo sikwindawo ehlala abantu ibe singavuya xa ungangxoli emva ko-11 ebusuku. Sisegumbini lendlu elikufutshane nesitudiyo esingaphezulu kwegaraji yethu. Kukho ingxolo encinci yosapho njengoko siqhubeka nosuku lwethu.
Le ndawo yeyabucala ngokupheleleyo kwaye ilungele ukungasondeli ebantwini ngokukhuselekileyo kunye nathi ababuki zindwendwe, nto leyo evumelana kakhulu neCOVID-19 yangoku. Imiphezulu yendawo icocwa kakuhle ngento yokubulala iintsholongwane engamanzi kuze kubekho into yokunciphisa iintsholongwane yezandla ukuze isetyenziswe lundwendwe kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle. Sikwabonelela nento yokugquma iduveyi ecocekileyo/ehlanjiweyo, iitawuli namashiti ebhedi eendwendwe.
Imoto enye ingapakwa kwizakhiwo zethu kwaye kukho indawo yokupaka esesitratweni esimahla efumanekayo kufutshane kakhulu nendlu. Ukuhamba ngebhasi ukuya edolophini kunye neYunivesithi yaseMassey kukuhamba imizuzu eyi-1 ukusuka endlwini, kwaye iMassey University kunye neUCOL zikumgama wemizuzu eyi-8 ukuya kweyi-10 ukusuka endlwini. Indawo engummelwane ikwindawo esembindini kwaye kulula ukufumana i-Uber okanye uqhube ukuya kuzo zonke iindawo zasePalmerston North.
Ubumelwane obukhulu kunye obuzolileyo. Indawo yethu ifakwe kakuhle kwicandelo elingasemva ngaphandle kwesitrato esihlala sizolile kwaye sithandeka. Ubumelwane bukwindawo esembindini kwaye kulula ukufumana i-Uber okanye uqhube ukuya kuzo zonke iindawo zasePalmerston North.
Umbuki zindwendwe ngu- Yemi
Siya kukwamkela ekufikeni kwakho, nangona kunjalo siyayihlonipha imfihlo yakho ngelixa uhlala nathi.